Nchekwa Email na Ojiji N'uwa | Martech Zone
N'oge na-adịbeghị anya, anyị nwetara nsogbu na onye na-eweta email anyị mgbe anyị weghachitere ụfọdụ adreesị email ochie na akaụntụ anyị. Otutu n'ime ha boun, anyị nwetara mkpesa SPAM na onye ọ bụla wee iwe nke na ha kpọtụrụ ndị na-eweta anyị iji mee mkpesa. Anyị merụrụ iwepu adreesị email ahụ kwuru na akaụntụ ahụ dịka arịrịọ sitere n'aka ndị na-eweta email anyị.
Ọnụ ọgụgụ dị na nke a ozi site na Ihe Nleba E-mail na-arụtụ aka na ụfọdụ nsogbu anyị gbadoro isi. 30% nke ndị mmadụ na-agbanwe adreesị ozi-e kwa afọ, 21% nke ndị mmadụ na-akọ email dị ka SPAM ọbụlagodi mgbe ha kwụsịrị n'ime ya, na 43% nke ndị nnata email na-ekwupụta email dị ka SPAM mgbe ha gụsịrị aha "site na" na-enweghị ọbụna na-agụ email!
IMO, nke a na-agba egwu n'etiti ISPs na ESP bụ nnọọ mkpụrụ. Na onwe m, echeghị m na nke ọ bụla n'ime omume ndị a nyeere m aka iwepụ igbe mbata SPAM. N'adịghị nke ahụ, a na-etinye ozi ịntanetị na-abawanye adaba na folda M - na - eme ka mmekọrịta na nkwukọrịta na - abawanye n'etiti m na ndị ahịa na atụmanya dị m mkpa.
Ihe omuma ihe omuma a bu ikike nke Ihe Nlereanya ma Hazie site Ihe osise.
Tags: nchekwa emailonye na-enye ọrụ emailspam oziemail ojijiespemail mba ụwaonye na-ahụ maka ịntanetịispemail njakịrịjunk nchekwaspamspam ọnụ ọgụgụ
Kwụsị igbu Ihe na-akpata .zụ ahịa
Apr 30, 2013 na 9: 00 AM
Nke a bụ nnukwu ihe ederede, echere m na stats ahụ dị ezigbo mma. Agbanwewo m e-mail ugboro ole na ole ma kọọkwala SPAM mgbe ọ na-abụghị. Mgbe ụfọdụ, anaghị m amata ya ruo mgbe chi jiri. "Hey ihe mere ABC si Company ozi ịntanetị?!" D'oh!